Skelaxin vs. Flexeril: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | မေ 2022
မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကျန်းမာရေးပညာရေး ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကျန်းမာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Skelaxin vs. Flexeril: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Skelaxin vs. Flexeril: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Skelaxin နှင့် Flexeril တို့သည်ကြွက်သားများကိုနှိမ်နင်းရန် FDA မှအတည်ပြုထားသောဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူတို့ကခေါ်ဆေးဝါးများအုပ်စုတစ်စု၌ရှိကြ၏ အရိုးကြွက်သားအပန်းဖြေ ။ Skelaxin နှင့် Flexeril ကိုယေဘူယျအားဖြင့် metaxalone နှင့် cyclobenzaprine ဟုသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုလုံးဝနားမလည်နိုင်သော်လည်းဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) စိတ်ကျရောဂါနှင့်သက်သာစေသောဆေးများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဆေးများသည်ကြွက်သားများသို့မဟုတ်အာရုံကြောများအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးသည်ကြွက်သားလျှော့ပေးသောဆေးများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်တူညီခြင်းမရှိပါ။ Skelaxin နှင့် Flexeril အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Skelaxin နှင့် Flexeril အကြားအဓိကကွာခြားချက်များကဘာလဲ။
Skelaxin ဆိုသည်မှာ metaxalone ပါ ၀ င်သည့်အရိုးကြွက်သားအပန်းဖြေမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျတက်ဘလက်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။ Skelaxin ကိုရေတိုကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။
Flexeril သည်အရိုးကြွက်သားများကိုဖြေလျော့ပေးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတက်ကြွသောပါဝင်မှုမှာ cyclobenzaprine ဖြစ်သည်။ Flexeril ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်အဖြစ်စီးပွားဖြစ်မရရှိနိုင်ပါ။ Flexeril ကိုယေဘုယျအားဖြင့် cyclobenzaprine အဖြစ်သာရရှိနိုင်သည်။ Cyclobenzaprine ကို Amrix တံဆိပ်ဖြင့်တိုးချဲ့ထားသောပုံစံဖြင့်လည်းရရှိနိုင်သည်။ Flexeril ကိုရေတိုကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏သတင်းအချက်အလက်က Flexeril ကိုနှစ်ပတ်သို့မဟုတ်သုံးပတ်ထက် ပို၍ မယူသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
Skelaxin နှင့် Flexeril အကြားအဓိကကွာခြားချက်များ
မူးယစ်ဆေးအတန်း အရိုးကြွက်သားအပန်းဖြေ အရိုးကြွက်သားအပန်းဖြေ
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ယေဘုယျအဆင့်အတန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျ Flexeril: ယေဘူယျအားဖြင့်သာရနိုင်သည်
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Metaxalone Cyclobenzaprine
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ တက်ဘလက် တက်ဘလက်၊ တိုးချဲ့ထားသောဆေးတောင့် (အမှတ်တံဆိပ် Amrix)
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? အကြံပြုထားသည့်ဆေးသည်တစ်နေ့လျှင် ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်ဆေးတစ်လုံး (၈၀၀ မီလီဂရမ်) သို့မဟုတ်နှစ် (၄၀၀ မီလီဂရမ်) ဆေးပြားဖြစ်သည် အကြံပြုထားသည့်ဆေးပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ဆေးတစ်ပြား (၅ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ် ၁၀ မီလီဂရမ်) ဖြစ်သည်
အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်ဆေးတစ်ဘူး (၅ မီလီဂရမ်၊ ၇.၅ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ် ၁၀ မီလီဂရမ်) (အသည်းပြproblemsနာများသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာများအတွက်မကြာခဏသောက်သုံးခြင်း)
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ကာလတို ရေတို (၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်ကျော်အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ)
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ အသက် ၁၂ နှစ်အထက်လူကြီးများနှင့်ကလေးများ အသက် ၁၅ နှစ်နှင့်အထက်အရွယ်ရောက်ပြီးကလေးများ
Skelaxin နှင့် Flexeril မှကုသသောအခြေအနေများ
Skelaxin နှင့် Flexeril တို့ကိုကြွင်းသောအရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်စူးရှသော၊ နာကျင်သောကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေများနှင့်လည်ချောင်းနာကျင်မှုများသက်သာစေရန်အခြားအစီအမံများနှင့်အတူအသုံးပြုရန်ညွှန်ပြသည်။
နှစ်မျိုးလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်မျိုးလုံးကိုအခြားအခြေအနေများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဆေးများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုကြွက်သားများချောင်းဆိုးခြင်းအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ဒါ့အပြင် Flexeril ထုတ်လုပ်သူသတင်းအချက်အလက် ဦး နှောက်နှင့်ကျောရိုးအမြှေးရောင်ရောဂါ (သို့) ဦး နှောက်လက်ခြေသေသောသူနှင့်ကလေးငယ်များအနေဖြင့်ဤဆေးသည်ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
အခြေအနေ skelaxin Flexeril
ပြင်းထန်ပြီးနာကျင်သောကြွက်သားဆိုင်ရာကြွက်သားအခြေအနေများ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Fibromyalgia တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
တင်းမာမှုခေါင်းကိုက်ခြင်း တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
အိပ်မပျော် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
TMJ မှပြင်းထန်သောမေးရိုးနာကျင်မှု တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril သည်ပိုမိုထိရောက်သလား။
အမေရိကန်မိသားစုသမား ကြွက်သားအပန်းဖြေမှုနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုတို့တွင်အားနည်းသော (နှင့်အနည်းငယ်သာ) အထောက်အထားရှိသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ကြွက်သားဖြေလျှော့ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများ၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူနာ၏ ဦး စားပေးမှုတို့အပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်သင့်ကြောင်းသူတို့ကအကြံပြုသည်။ ဤထုတ်ဝေမှုကကြွက်သားလျှော့ပေးသူများကိုကာလတိုအသုံးပြုရန်အရေးကြီးကြောင်းနှင့်ကြွက်သားအပန်းဖြေမှုကိုရေရှည်အသုံးပြုခြင်းမှကာကွယ်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်အခြားဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်လည်းထပ်လောင်းပြောကြားသည်။ Tylenol (acetaminophen) သို့မဟုတ် ibuprofen ကဲ့သို့သော nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါး (NSAIDs) ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril သည်သင့်အတွက်သင့်တော်မှုရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သူသို့မဟုတ်သူမသည်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ဆေးကုသမှုအခြေအနေများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများနှင့် Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril တို့နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနိုင်သောသင်သောက်သုံးသောဆေးဝါးများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
Skelaxin vs. Flexeril နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
အာမခံအစီအစဉ်အများစုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် Skelaxin ကိုယေဘူယျပုံစံ metaxalone ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ Medicare အပိုင်း D လွှမ်းခြုံမှုကွဲပြားသည်။ ယေဘူယျ Skelaxin ၏ပုံမှန်ဆေးညွှန်းမှာအိတ်ထဲတွင်ဒေါ်လာ ၁၄၇ ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းစျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၅၀ အောက်သို့လျှော့ချရန် SingleCare ကူပွန်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အာမခံနှင့် Medicare အပိုင်း D အစီအစဉ်အများစုသည် Flexeril (ယေဘုယျ) ကိုအကျုံးဝင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Flexeril မရပါ။ ယေဘူယျ Flexeril ၏ပုံမှန်ဆေးညွှန်းသည်အိတ်ကပ်ထဲမှ ၂၀ ဒေါ်လာခန့်ကျသင့်မည်။ သို့သော် SingleCare ဖြင့်ယေဘုယျ Flexeril ကိုဒေါ်လာ ၇ မှ ၈ ဒေါ်လာအထိဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare အပိုင်း D ကိုဖုံးလွှမ်း? မဟုတ်ဘူး ဟုတ်ကဲ့ (ယေဘူယျ)
စံသောက်သုံးသော 30, 800 မီလီဂရမ်ဆေးပြား 30, 10 မီလီဂရမ်ဆေးပြား
ပုံမှန် Medicare copay တိကျသောအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ $ 1- $ 54 $ 0- $ 1
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 48 + $7+
Skelaxin vs. Flexeril ၏အဖြစ်များသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
နှစ် ဦး စလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများအလွန်သက်သာစေသောဆေးနိုင်ပါတယ်။ Skelaxin ၏အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအိပ်ငိုက်ခြင်း၊ မူးဝြေခင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊
Flexeril ၏အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအိပ်ငိုက်ခြင်း၊ မူးဝြေခင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
မည်သည့်ဆေးကိုမဆိုမည်သည့်ဓာတ်မတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုသည်ရှားပါးသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ Serotonin ရောဂါ , serotonin buildup ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်အခြေအနေကိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အိပ်ငိုက် ဟုတ်တယ် သတင်းပို့သည်မဟုတ် ဟုတ်တယ် ၂၉-၃၈% *
မူးယစ်ဆေးဝါး ဟုတ်တယ် သတင်းပို့သည်မဟုတ် ဟုတ်တယ် ၁၁%
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် သတင်းပို့သည်မဟုတ် ဟုတ်တယ် ၅%
စိတ်တို ဟုတ်တယ် သတင်းပို့သည်မဟုတ် ဟုတ်တယ် ၁-၃%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် သတင်းပို့သည်မဟုတ် ဟုတ်တယ် ၁-၃%
အော့ ဟုတ်တယ် သတင်းပို့သည်မဟုတ် ဟုတ်တယ် ၁-၃%
စိတ်ဆိုးအစာအိမ် ဟုတ်တယ် သတင်းပို့သည်မဟုတ် ဟုတ်တယ် ၁-၃%
ပါးစပ်ခြောက် မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၂၁-၃၂%
* Flexeril ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရာခိုင်နှုန်းများသည်ဆေးပမာဏအပေါ်မူတည်သည်
ရင်းမြစ် - DailyMed ( skelaxin ), DailyMed ( Flexeril )
Skelaxin နှင့် Flexeril မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု
Skelaxin နှင့် Flexeril တို့သည်အရက်၊ barbiturates နှင့်အခြား CNS စိတ်ကျရောဂါ (benzodiazepines, opioids, antihistamines and sedative-hypnotics) တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril သည် serotonin ကိုတိုးပွားစေသည့်အခြားဆေးဝါးများနှင့်တွဲသုံးသောအခါ serotonin syndrome ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။ ထိုကဲ့သို့သော SSRI, SNRI, ဒါမှမဟုတ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်စိတ်ကျရောဂါကုသရေး; ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းအတွက် triptans; dextromethorphan ပါသည့်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အအေးမိဆေးများ။
Flexeril သည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဆင်တူသည် (amitriptyline နှင့် nortriptyline ကဲ့သို့) ။ ထိုကြောင့်၊ tramadol နှင့်အတူသောက်သောအခါအတက်အကျပိုများနိုင်သည်။
Skelaxin နှင့် Flexeril နှစ်မျိုးလုံးသည် tramadol (နှင့်အခြား opioids) နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ serotonin syndrome ရောဂါနှင့် CNS စိတ်ကျရောဂါအပြင်ထပ်တိုးရောဂါလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရန်အတွက်သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူကိုတိုင်ပင်ပါ
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း skelaxin Flexeril
အရက် အရက် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Phenobarbital Barbiturates ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Zolpidem sedative hypnotics ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ရသေ့တောင် Opioids ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Tranylcypromine MAO Inhibitors ဟုတ်တယ်
Diphenhydramine Antihistamines ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Sertraline SSRI စိတ်ကျရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Venlafaxine SNRI စိတ်ကျရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Zolmitriptan ထရီပိုလီ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Tussin-DM dextromethorphan ပါဝင်သော OTC / Rx ချောင်းဆိုးထုတ်ကုန်များ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Skelaxin နှင့် Flexeril တို့၏သတိပေးချက်များ
သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများနှင့်အသည်းသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ပြproblemsနာများသို့မဟုတ်သွေးအားနည်းရောဂါရှိသည့်လူနာများအတွက် Skelaxin ကိုသတိထားပါ။
Skelaxin ကိုအစာနှင့်စားခြင်းသည် CNS ၏စိတ်ကျရောဂါကိုသိသိသာသာတိုးစေနိုင်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာသည်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
Flexeril ကို ၁၄ ရက်အတွင်း MAO inhibitor ကိုမယူပါနှင့်။ Flexeril ပေါင်းစပ်ခြင်းကအတက်အကျများနှင့်သေစေနိုင်သည်။
hyperthyroidism၊ နှလုံးပျက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနှလုံးသို့မဟုတ်ရစ်သမ်ပြproblemsနာများရှိသည့်လူနာများသည် Flexeril ကိုမသောက်သင့်ပါ။ Flexeril ကိုသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများနှင့်အသည်းပြproblemsနာရှိသည့်လူနာများအတွက်သတိထားပါ။ အသည်းပြwithနာများနေသောလူနာများတွင်တိုးချဲ့ထားသောပုံစံ (Amrix) ကိုမသုံးပါနှင့်။
Flexeril ကိုဆီးလမ်းကြောင်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထောင့်ပိတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း glaucoma၊ intraocular pressure တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် anticholinergic ဆေးသောက်နေသည့်လူနာများရှိလူနာများတွင်သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။
Flexeril ကိုရပ်ဆိုင်းသည့်အခါဆုတ်ခွာမှုလက္ခဏာများကိုစဉ်းစားပါ။ ဆေးကိုလျှင်မြန်စွာရပ်တန့်ခြင်းသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
Amrix (တိုးချဲ့ထုတ်လွှတ်သော cyclobenzaprine) လုံးလုံးတောင့်တင်းသည်။ ဝါးခြင်းနှင့်မကြိတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
Skelaxin နှင့် Flexeril သတိပေးချက်များ
နှစ် ဦး စလုံးဆေးဝါးများ၏စာရင်းအပေါ်ဖြစ်ကြသည် ဘီယာစံ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ (အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်) နှင့်မသင့်လျော်ဟုဆိုလိုသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူကြီးအများစုသည်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ သက်သာစေသောဆေးများနှင့်ပြိုကွဲခြင်းအန္တရာယ်များကြောင့်ကြွက်သားလျှော့ချခြင်းကိုကောင်းစွာသည်းမခံပါ။ ဒါ့အပြင်ဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုသည်းခံစေခြင်းငှါအလိုငှါဆေးများမှာထိရောက်မှုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်စိတ်ကျဆေးသို့မဟုတ်အရက်သေစာနှင့်ပေါင်းစပ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးရခြင်း (တမင်သို့မဟုတ်မတော်တဆ) သည် Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril မှဖြစ်သည်။ လူနာများအနီးကပ်စောင့်ကြည့်။
Serotonin ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ လူနာများနှင့်၎င်းတို့၏စောင့်ရှောက်သူများသည်ရောဂါလက္ခဏာများ (ချွေးထွက်ခြင်း၊ အဖျားခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်သို့မဟုတ်နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်း) လက္ခဏာများကိုသတိထားသင့်ပြီးရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ပါကချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူရမည်။ Serotonin Syndrome သည် Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril ကိုသောက်သုံးလျှင်အခြားဆေးဝါးများနှင့် တွဲဖက်၍ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းခြင်း၊ triptans သို့မဟုတ် dextromethorphan ပါသည့်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အအေးခံခြင်းများကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များဖြစ်နိုင်သည်။
Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril နှင့်သင်မည်သို့တုန့်ပြန်သည်ကိုသိသည်အထိစက်ပစ္စည်းမမောင်းပါနှင့်။ မူးယစ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်ငိုက်မျဉ်းခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Skelaxin vs. Flexeril နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Skelaxin ဆိုသည်မှာကြွက်သားများကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်အတွက်ကြွက်သားများကိုလျှော့ချပေးသည်။ Skelaxin ၏ယေဘုယျအမည်မှာ metaxalone ဖြစ်သည်။
Flexeril သည်အရိုးကြွက်သားချောင်းဆိုးခြင်းများကိုကုသရန်အတွက်အသုံးပြုသောကြွက်သားအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် Flexeril သည် cyclobenzaprine ဖြစ်သည်။
Skelaxin နဲ့ Flexeril အတူတူလား။
Skelaxin နှင့် Flexeril တို့သည်နှစ်မျိုးလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးအစား (အရိုးကြွက်သားလျှော့ချသူ) တွင်ရှိသော်လည်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ ဆေးထိုးခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းများစသည့်ခြားနားချက်များရှိသည်။
Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril ပိုကောင်းသလား။
နာကျင်မှုသက်သာစေရန်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုမည်သည့်ဒေတာမှတိုက်ရိုက်မနှိုင်းယှဉ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ကြွက်သားလျှော့ပေးသူလိုအပ်လျှင်သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်သင်၏ဆေးဝါးများအနက်မှတစ်ခုအနေနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းမနေကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများ၊ အခြေအနေများနှင့်သင်သောက်သည့်ဆေးဝါးများ (Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်) ကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
The Skelaxin ထုတ်လုပ်သူသတင်းအချက်အလက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံကသန္ဓေသားဒဏ်ရာရကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းထိုသို့သောအတွေ့အကြုံသည်လူ့သန္ဓေသားအားခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောသို့မဟုတ်သိမ်မွေ့သောပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ metaxalone ကိုဘေးကင်းစွာအသုံးပြုခြင်းကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကအကျိုးကျေးဇူးများသည်အန္တရာယ်များထက်ကျော်လွန်သည်ဟုမဆုံးဖြတ်ပါကထို့ကြောင့် Skelaxin ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ (အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်) သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သည့်အမျိုးသမီးများအတွက်အသုံးပြုရန်မတိုက်တွန်းပါ။
The Flexeril ထုတ်လုပ်သူသတင်းအချက်အလက် ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးများတွင်လုံလောက်သော၊ ကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားသောလေ့လာမှုများမရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် Flexeril ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်လိုအပ်မှသာလိုအပ်သင့်သည်။
ငါအရက်နှင့်အတူ Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril ကိုသုံးနိုင်သလား?
Skelaxin သို့မဟုတ် Flexeril ကိုအရက်ဖြင့်သုံးစွဲခြင်းသည်မူးဝြေခင်းနှင့်မူးဝြေခင်းကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မတော်တဆမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ညှိနှိုင်းမှုအားနည်းစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အရက်နှင့်အတူကြွက်သားအပန်းဖြေယူခြင်းအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခို၏အခွင့်အလမ်းကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
အောက်ပါစာရင်းအပါအ ၀ င်ကြွက်သားဖြေလျှော့သူတိုင်းသည်သင့်လျော်သောဆေးထိုးချိန်၌စူးရှသောကြွက်သားနာကျင်မှု / ချောင်းဆိုးခြင်းကိုကုသရာတွင်ထိရောက်သင့်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဟုတ်တယ်၊ Skelaxin ကစူးရှတဲ့ကြွက်သားတွေနာကျင်မှုကိုကူညီပေးတယ်။ အနားယူခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်အခြားအစီအမံများနှင့်အတူ Skelaxin ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုလုံးဝနားမလည်နိုင်သော်လည်းဗဟိုအာရုံကြောစနစ်စိတ်ကျရောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ Skelaxin သည်ကြွက်သားများသို့မဟုတ်အာရုံကြောများပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်အလုပ်မလုပ်ပါ။
Skelaxin သည်မည်သည့်ဆေးဝါးကဲ့သို့မဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်အပေါ်ကသတိပေးချက်များအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက Skelaxin သည်သင့်အတွက်သင့်တော်ပြီးသင်၌ရှိသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်သင်သောက်သုံးသည့်ဆေးဝါးများနှင့်သဟဇာတဖြစ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါကသင်သည် Skelaxin ကို (ရေတိုအသုံးပြုရန်အတွက်) အန္တရာယ်ကင်းစွာပြtakeနာမရှိဘဲအန္တရာယ်ကင်းစွာယူဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားဆေးကုသမှုခံယူပါ။
zyrtecd၁၂ နာရီ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါအတွက်သကြားဓာတ်အဆင့်ဘယ်လောက်လဲ